About Us - Sichuan Aixiang Teknolojia Co., Ltd.
About Luxo lay
Sichuan Aixiang Technology Co., Ltd. dia ny manam-pahaizana ny hazavana-lanjan'ny an'ireo trano rafitra ao Shina, miaraka amin'ny marika roa, Aixiang Fambolena sy Luxo trano-lay ambaniny ny anarany.
Ny orinasa no misy ao Chengdu, dia ny tampony sy ny mpanamboatra lay aluminium ny varotra mpiara orinasa ao Western Shina.
Isika tafiditra ao amin'ny famolavolana & vokatry iray-mijanona tranga tetikasa fanompoana, ary ny vokatra sy Ankehitriny-service dia eken'ny na aiza na aiza ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina mpanjifa. Isika 're hanome tena nanolo-tena ho teti-dratsy sy namboarina manokana glamping trano-lay, lafo vidy ala nenina trano-lay, ary ny trano fandraisam-bahiny ho an'ny trano-lay ny Toerana mahafinaritra mangirana, ny fizahan-tany tena toetrany, tontolo iainana orinasa sakafo karakaraina fialam-boly, ny tontolo iainana sy ny famolavolana drafitra vondrona manan-danja hafa.
Izahay dia manana karazany maro ny tranokala misy galmping, angon-drakotra tranobe mafana mba ho safidinao.
Ho an'ny mpanjifa mitady trano fanamboarana modely vaovao kokoa, afaka manome serivisy avo lenta isika.
Manolotra serivisy feno izahay avy amin'ny famolavolana foto-kevitra ho an'ny fanatanterahana ny tetik'asa.
Miverena-key Vahaolana ho an'ny Light-Weight Architectural Structure
Ny orinasa manana fitaovana famokarana maoderina, mafy fikarohana sy ny fampandrosoana sy ny hery fanorenana, amin'ny ekipa matihanina miaraka taona ny traikefa ara-teknika. Tsy manolotra famolavolana, vokatry, fametrahana, ary ny fikojakojana ny tolotra rehetra aluminium karazana firaka sy ny hamaivanan-toe rafitra vy lanja.
Ny Engineering sy ny Teknolojia amin'ny departemantan'i izao roa constructors PRC Certified kilasy voalohany, telo constructors PRC Certified faharoa kilasy, fito ambony endrika sy enina ambin'ny folo varotra, izay amin'ny asany ny 5 taona, ary afaka manome matihanina vokatra famolavolana sy ny tetikasa vahaolana ny mpanjifa haingana sy mahomby
Ny Values: fisaorana, marina, matihanina, mpankafy, mpiara-miasa
Luxo trano-lay mihazona ny raharaham-barotra filozofia fa tsy fivadihana toy ny fakany, tsara tonga aloha, tena mila fanavaozana vaovao toe-tsaina mba Atao manara-penitra ny tsipiriany rehetra momba ny asa, nanome vidiny-mahomby vokatra sy ny fanompoana ho an'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany miaraka amin'ny toe-tsaina vaovao.
Tsy izahay ihany no manome ny haavon'ny fanompoana izay mahatonga ny mpanjifa te fianakavian'ny mpanjaka. Tsy amim-pitiavana foana ny handray ny fototra ho an'ny asa-toerana fanadihadiana, handray ny hanorina fifandraisana raharaham-barotra-mpiara-miasa aminay.
Safari lay, Luxury Safari lay, Hotel lay, Outdoor trano-lay , Safari lay Hotel, Cotton lamba Bell trano-lay ,